Kachasị Sịlịn Liner Laser Marking Machine BL-MCS30A Manufacturer and Factory | Boln
Eriri Laser akara Machine BL-MFP20A / 30A
Portable Fiber Laser akara Machine BL-PMF30A
CO2 laser marking igwe BL-MCO2-30W
UV Laser akara Machine BL-MUV-5W
Turbochargers Laser akara na leakage Test Machine
Gear aro Laser akara Machine BL-MGS-IPG100W
Gear Laser akara igwe BL-MG-IPG100W
Sịlịnụ Liner Laser Marking Machine BL-MCS30A
Nke a bụ ahaziri laser welara na abụọ marking isi, Ezubere maka osise cylinder liner, optimizing marking oge na mbenata ala ugboro. Njikọ eriri dị n'etiti 33mm na 118mm.
Ddị isi okpukpu abụọ na-enyere nnukwu mmelite aka, na-achọpụta oge okirikiri nke usoro akara, site n'otu oge na-akanye akara elu na akụkụ nke eriri;
2.Akara usoro ihe odide na odide zuru oke nke welded, agbatị na milled. Nke a na - eme ka o kwe omume ịmepụta akụkụ ndị na - adịte aka, ma na - ekwe nkwa oke nkenke na usoro akara laser, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enwere mmetụta na mberede ma ọ bụ mgbanwe ndị a na-ahụghị ama nke akara ahụ;
3.Axis Y na isi laser gbanwere na ogo 90 maka akara akara akụkụ akụkụ. Axis Z (strok 700mm) na-eme ka o kwe omume ịde akara ndị dị elu. Axis X (strok 200mm) na-eme ka o kwe omume ilekwasị anya na ndị na-agbanye akara na dayameta nke dị n'etiti 33mm na 118mm;
4.Akara ndebanye akara nwere ihe mmetụta abụọ nke na-ekwe ka ngwanrọ ahụ chọpụta ihe ndị ahụ na-akpaghị aka ịmalite akara, enweghị arụmọrụ ndị ọzọ, meziwanye arụmọrụ na-arụ ọrụ. Naanị mgbe ihe mmetụta abụọ chọtara ngwaahịa ahụ ọnụ, usoro akara ga-amalite;
5.Customized QR code encryption software ọkachamara na ụgbọala akụkụ ụlọ ọrụ na-mepụtara dabere na ahịa chọrọ na ike kwalite free maka ndụ, na pụrụ iche ndudue proofing technology, na-ezere imekwa na-efu marking, huu marking àgwà. Sọftụwia anyị nwere ike ijikọ ọnụ na nchekwa data ndị ahịa yana iwepụta ozi imepụta ihe.
Ogologo ebili mmiri
Max na-agba Speed
Tinyegharịa Ọnọdụ ziri ezi
Min Line Obosara
Justgbazi ike nso
Na-agba ọsọ Okpomọkụ
Ọnọdụ jụrụ oyi
Ikuku jụrụ oyi
990mm x 750mm x 2130mm
Nke gara aga: Aluminom Profaịlụ Laser akara igwe BL-MA30A
Osote: Die Castings Laser akara Machine
Turbochargers Laser akara na leakage Test Ma ...
Aluminom Profaịlụ Laser akara igwe BL-MA30A
Die Castings Laser akara Machine
VIN Code Laser Equipment abụọ ...